Ukukhethwa kwezinto ezintsha ngoJanuwari | Uncwadi lweNdaba
Omnye unyaka oza kulayishwa ukufunda okutsha. Oku ku ukhetho lwezinye izihloko ezikhutshwa ngoJanuwari. Ngeencasa ezahlukeneyo kunye namagama esizwe nakwamanye amazwe.
1 Iprojekthi yeSilverview-uJohn Le Carré
2 Amanye amantombazana - Santiago Díaz
3 Ukwenziwa koMvukeli-uLorenzo Silva kunye noNoemí Trujillo
4 Ebusika ezintlanu - Olga Merino
Iprojekthi yeSilverview - UJohn Le Carré
Siqala ngeklasikhi enembali ende njengeLe Carré. Ibali lakhe elitsha lisazisa kuJulian Lawndsley, oye wawuyeka umsebenzi wakhe onzima kwiSixeko saseLondon ukuze aphile ubomi obulula njengomnini wevenkile yeencwadi kwidolophu encinane engaselwandle. Kodwa kwiinyanga ezimbalwa emva kokumiselwa, utyelelo luphazamisa uxolo lukaJulian: olo luka-Edward Avon, umphambukeli wasePoland ohlala eSilverview, indlu enkulu engaphandle kwedolophu, obonakala esazi kakhulu malunga nosapho lukaJulian kwaye ubonisa kakhulu. umdla wokuqhuba ishishini lakhe eliphantsi.
Amanye amantombazana -Santiago Diaz
USantiago Díaz wenza i-debut yakhe enkulu kwinoveli kunye Utata olungileyo Ngalo wafumana impumelelo enkulu yokugxeka kunye nokufunda. Ngoku ubuya nesi sihloko sesibini asidlalayo kwakhona umhloli u-Indira Ramos. Samfumana echitha iintsuku zakhe zokugqibela zekhefu kwidolophu encinci yase-Extremadura kwaye nini buyela emsebenzini EMadrid, kunzima kakhulu kuye ukujongana nomhloli ongaphantsi u-Iván Moreno, afihla kuye imfihlo enkulu.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka basebenze kunye kwakhona ukusombulula ityala elitsha: kwisikhululo segesi imikhondo yeenyawo zeminwe yalowo iminyaka emininzi eyona ndoda ifunwayo elizweni. Ukubulala ngokumasikizi akwenzileyo kuchaziwe kwaye amapolisa akanakuphinda amvalele umrhanelwa ophambili, nosele enethuba elide ephila phantsi kwegama lobuxoki. Kodwa uRamos uqinisekile ukuba umbulali njengaye kwafuneka abulale kwakhonar, ke kufuneka ufumane ulwaphulo-mthetho apho ungohlwaywa.
Ukwenziwa komvukeli -Lorenzo Silva kunye noNoemí Trujillo
U-Lorenzo Silva uvula i-2022 kabini ngesi sihloko sibhalwe kwizandla ezine kwakhona noNoemí Trujillo. Kuyo bathabatha Umhloli uManuela Mauri ukuba, ukususela ekuqaleni kwe isilumkiso sempilo, akazange abe nomoya kwaye okokuqala ebomini bakhe uziva ukonganyelwa ngeziganeko. Emva koko, nangaphezulu, a ulwaphulo-mthetho kabini Okwenzekileyo e-Alcalá de Henares kuya kuthatha ubuthongo bakho: UCarlota, intombazana eneminyaka elishumi elinesithoba ubudala, wazisa amapolisa xa efumanisa ukuba utata wakhe kunye nomama wesibini bedutyulwe bebulewe endlwini yabo. Iqela elingekho mthethweni kunye nobungqina bolutsha olulishumi ekulweni noluntu luya kuba ngundoqo kwisisombululo setyala.
Ukongeza, uSilva naye unikezela Isandla sikaEstere, enye ingqokelela yamanqaku ngaphezulu kwangoku nje ukusuka entwasahlobo ka-2020 ukuya phakathi ekwindla ka-2021.
Ubusika obuhlanu -Olga Merino
UOlga Merino wahlala apho EMoscow njengonobhala we Iphephandaba laseCatalonia ngoDisemba 1992, incinci emva kokuwa kweSoviet Union. Apho wachitha ubusika abahlanu kwaye waba ingqina lonke utshintsho lwexesha ekwaphawula ngaphambili nasemva kobomi bakhe bobuqu. Kule diary yentombazana eneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubudala, usixelela indlela elilandela ngayo iphupha lokuba ngumbhali, iwonga lobuchwephesha njengentatheli, kunye nothando olupheleleyo nolubalaseleyo. Yonke into iyaphikisana nelizwi lanamhlanje laloo mbono.
Violet -UIsabel Allende
Yintoni entsha ngo-Isabel Allende eneenkwenkwezi ngegama lomfazi: UVioleta, oza emhlabeni ngosuku olunesaqhwithi 1920 kwaye ungumntwana wokuqala kwintsapho yabantwana abahlanu abaxokozelayo. Ukususela ekuqaleni ubomi bakho buya kuphawulwa ngu iziganeko ezingaqhelekanga. Kusekho impinda yeMfazwe Enkulu xa umkhuhlane waseSpain ufikelela kunxweme lwelizwe lawo laseMzantsi Melika, phantse kanye ngalo mzuzu wokuzalwa kwawo.
Enkosi kuyise, usapho luya kuphuma lungonwabanga kule ngxaki ukuze lujongane nenye entsha: i Uxinzelelo olukhulu kuphazamisa ubomi obunobuhle bukaVioleta kude kube ngoko. Usapho lwakho luya kuphulukana nayo yonke into kwaye uya kunyanzelwa ukuba athathe umhlala phantsi a ummandla wasendle kwaye kude nelizwe. Apho uVioleta uyakufika emdala kwaye uya kuba naye umkhweli wokuqala.
Ku ileta ebhekiswa kumntu amthandayo ngaphezu kwabo bonke abanye, uVioleta ukhumbula oko kwakubuhlungu thanda ukuphoxeka kunye nezothando ezishushu, amaxesha obuhlwempu kunye nokuchuma, ilahleko eyoyikekayo kunye nolonwabo olukhulu.
Iplanethi - USusana Martín Gijón
Kwaye sigqiba ngelinye ibali Indlela yeVargas, umhloli odumileyo kaMartín Gijón. Kweli bali elitsha imbonakalo kwibala yegalufa ye isidumbu esophayo yowasetyhini ibeka iQela labaBulala be Sevilla. Kwakhona, kwixhoba Bamnqumla iinyawo. UVargas kuya kufuneka ayirhoxise iholide ecetywayo kunye noPaco Arenas, umcebisi wakhe wangaphambili kunye nothando oluyimfihlo athe waya kuhlala naye. Lithuba lakhe lokuba aphande embindini wedolophu isilumkiso esiphezulu seemeko zemozulu yaye itshatyalaliswe zizikhukula zemvula ezishiye abaninzi bengekho.
Ngeli xesha, iindaba ziyanda ukuba i Umbulali obizwa ngokuba yi-Animalista wayenokuba usaphila Kwaye ngekhe enze yedwa, kuba abanye abantu abalusu bavela efama, bekukho umsitho wegazi kwi-aquarium kunye nokuphanga okumangalisayo kwizibuko laseHuelva. Kodwa kungekudala yonke i-brigade iya kuba kugqatso oluchasene nexesha lokuhlangula izigidi zabantu kwingozi enkulu kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ukukhethwa kwezinto ezintsha ngoJanuwari